Jose Mourinho wuxuu haystaa ciyaartooyo uu ka maydhay ‘maskaxdii hore’, isla markaana awood u leh inay ku guuleystaan horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League.
Sida uu sheegay Tim Sherwood oo hore tababare ugu soo noqday kooxaha Chelsea iyo Manchester United, ayaa ka hadlay qaab ciyaareedka cajiibka ah ee ay Tottenham la timid xili ciyaareedkan iyo inay hoggaanka horyaalka Premier League hayso.
Jose Mourinho ayay kooxdiisu 20 dhibcood ka heshay 27 suurtogal ahaa, waxaanay kasoo doogeen guul-darro ay ku bilowdeen horyaalka oo ay Everton ku garaacday 1-0, laakiin macallinka reer Portugal ayaa intii ka dambaysay helay qaaciidada guusha isagoo xasuuqyo u geystay Southampton iyo Manchester United.
Spurs ayaa sii wadatay guusheeda oo dhoolatus kale ka samaysay ciyaartii ay Manchester City ku qaabishay Sabtidii, waxaanay ku garaacday 2-0, taas oo jamaahiirta kooxdaas u horseedday inay bilaabaan riyo ah inay ku guuleysan doonaan xili ciyaareedkan.
Tim Sherwood oo ka hadlay awoodda ay Tottenham lasoo baxday ayaa yidhi: “Qaab ayuu u helay kooxdiisa ciyaartoyda ah ee uu haysto. Waxa kale oo uu keenay Sergio Reguilon oo saxeex wanaagsan oo dhinaca bidix ah, balse Pierre-Emile Hojbjerg ayaa siday aniga ila tahay saxeexa ugu wanaagsan ahaa. Wuxuu kusoo baxay qaab-ciyaareedkooda, waxaanu ilaaliyaa difaacyada dhexe.”
Tim Sherwood oo hadalkiisa sii wataa waxa uu intaa ku daray: “Jose wuxuu maskaxdii hore ka maydhay ciyaartoydiisa si ay ugu shaqeeyaan iyagoo rumaysan inay wax ku guuleysan karayaan. Waxay u baahan yihiin inay koobab ku guuleystaan kooxdan ciyaartoyda ahi.
“Marka aad si adag u ciyaarto sidooda oo kale, waxa uu ku sameeyey maskax maydhis iyo rumayn.”
Tim Sherwood oo horyaalka Premier League kula guuleystay kooxda Blackburn Rovers xili ciyaareedkii 1994-95, waxaanu rumaysan yahay in labadan ciyaartoy ay yihiin kuwa Tottenhyam u horseedaya guusha, waxaanu yidhi: “Markii aanu haysanay ciyaartooyo Son iyo Kane oo kale ah oo heer caalami ah, lagana yaabo inaad la ciyaarayso koox kasta oo kale oo dunida ah, mar walba waxaad helaysaa fursad.”
Danab Particular Pressure troopers died after Al-Shabaab IED